အီးယူ-ဘီလာရုဇ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအကျပ်အတည်း အဖြေရှာရန် ပူတင်နှင့် Michel တို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ - Xinhua News Agency
မော်စကို၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် အီးယူ-ဘီလာရုဇ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအကျပ်အတည်း နှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာပြဿနာများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဖြေရှင်းနည်းများကို ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Charles Michel နှင့် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေစံနှုန်းများနှင့်အညီ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် အရေးကြီးကြောင်းကို နှစ်ဖက်စလုံးက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကရင်မလင်နန်းတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဘီလာရုဇ်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်များ ချမှတ်ရန် အီးယူ၏ လုပ်ရပ်သည် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ပူတင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပိုလန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ အဓိကရုဏ်းဖြိုခွင်လက်ပစ်ဗုံးများ၊ မီးသတ်ပိုက်များနှင့် အခြားကိရိယာများ အသုံးပြုမှုကို ပူတင်က ထပ်လောင်း ထောက်ပြခဲ့ပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် တားဆီးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းဆိုသည်။
ပူတင်နှင့် Michel တို့သည် ယူကရိန်းပဋိပက္ခ နှင့် Nagorno-Karabakh၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် လစ်ဗျားတို့တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လက်ရှိအခြေအနေများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MOSCOW, Nov. 24 (Xinhua) — Russian President Vladimir Putin discussed possible solutions to the EU-Belarus refugee crisis and other international issues inatelephone call with European Council President Charles Michel on Wednesday.
Putin and Michel also discussed the Ukrainian conflict and the current situation in Nagorno-Karabakh, Afghanistan and Libya. Enditem